I-KID CUDI: INQWELOMOYA YENQWELOMOYA: UHAMBO OLUYA KUVAVANYO LWEEALBHAMU YENYANGA - IINDABA
Inqwelomoya yeNqwelomoya: Uhambo oluya kwiNyanga kaMama
Umlobi omtsha waseCleveland uKid Cudi Inqwelomoya yeNqwelomoya: Uhambo oluya kwiNyanga kaMama imele ikhathalogu yakhe encinci: Ubungakanani obukhulu, obuzolileyo, obuhlala buhle-izandi ezintle-kwaye emva koko lomfo , beme phambi kwabo.
Jonga isihloko sealbham: UKid Cudi ubuyela emva enyangeni. Ixesha linengqiqo. Amacwecwe akhe amabini okuqala abanjelwa apho, zombini zaya ngegolide. Ngoku ukuba uye wakhukuliseka ngokusisigxina kwi-GOOD I-axis yomculo, uhambo olubuyayo mhlawumbi lubonakala luthandeka. Umkhondo wokuqala, 'indawo ekuyiwa kuyo: iNyanga kaMama' icwangcisa ikhosi-ivula ngokukhanya okucima phezulu, kwaye inika uloyiko lokwenene kunye noloyiko (uCudi ebehlala elungile nabahlanganisi). Kodwa isixhobo esopha ngokukhawuleza kumkhondo wokuqala opheleleyo, 'Ukuya kumsitho', kwaye, ngokuqinisekileyo, uCudi uyabonakala. Kwikwayara, uthi 'ndiya ... Ngu. Zonke. Kwenzeka, ' , ucebisa ukuba kuphela kweqabane lakho kule nqanawa yenyanga kukudibana okuphakathi kwinqanaba lokuthengisa.
Okwangoku yikhathalogu yeKid CuDi encinci: Indawo ebanzi, ezolileyo, edla ngokuba ntle-izandi ezintle- emva koko lomfo , beme phambi kwabo. UKid Cudi ebemi phambi komculo wakhe okoko wakhe Ngo-2009 , esenza konke okusemandleni akhe ukukuphazamisa kwiitalente zakhe zokwenyani: indlebe yomqambi yomoya, incasa yomvelisi oqeqeshiweyo ngemibala yeethoni. Iingoma zakhe, nangona kunjalo, zihlala zizijethi eziphonswe emnyango wentsimbi. 'Umdala kangaka, hlawula onke amatyala akho, ukanti uyiZombie,' ucula 'Ukuya Kumsitho'. Ukucula kwakhe kucaba ngokungenalusini, kwaye iingoma zakhe zenze u-doodle ngokungahambelani nale ngoma inye-ntathu ebeyiqhula ukusukela 'nge-N Nite'. Ukuya kwakhe kwi-cadence njenge rapper kuninzi 'nguAdam Sandler elingisa rapper' kune 'rapper.' Ezi mpawu kwakunzima ukungahoyi xa wayefika, kwaye akenzanga nto kwaphela ukunciphisa okwethutyana.
Kuyo yonke le micimbi, ukungabikho kwakhe kwengcinga emnandi njengemvumi yeyona nto yoyikisayo kwaye kunzima ukuhamba kuyo. Wonakalisa phantse nawuphi na umkhondo aphefumla kuwo. I-synths ethi 'Kubi kakhulu kufuneka ndikutshabalalise' ziyakhazimla njengokukhanya emanzini, ii-accents ezincinci zokubetha ezihamba ngaphantsi nangamanqaku epiyano zibonelela ngebhasi. Ingoma yomculo egudileyo, eyonwabisayo, kodwa uCudi uyayonakalisa, ukuthintitha kunye ne-tum-de-tum-isisu kuyo yonke indawo, njengomfundi wesibhozo owayezibuza kwisitudiyo esingakhathalelwanga kwaye washiya elakhe ilizwi ngenxa yokuhleka. Khetha nayiphi na ingoma: 'Ukopha kwangaphakathi', uthatha ukuhanjiswa komlomo we-mush onokuba sisibetho sokulinganisa imeko yesihloko somculo. Mhlawumbi kufanelekile ukuba nomfanekiso ngqondweni lo mfo ucula phantsi ngomlomo ogcwele amazinyo aqhekekileyo? Ngalo naliphi na ixesha, umculo uyawa ungqonge kuye ngokungathi unxilile ubambelele kwintonga yekhethini.
jank iingoma ezingathandekiyo zepop
Ukuhamba ngempumelelo ujikeleze ialbham ye-Kid Cudi, ke, kukufumana ulunge kakhulu ekucofeni ecaleni komda. Umzobo othandekayo wepiyano apha, i-sonar blip ehamba ngomxube phaya. Ngenceba, INDAWO YOKUHLALA inyusa umyinge kwizixhobo zomculo kwiitudiyo zeCudi, kwaye kunjalo, ukuya kwinqanaba elikufutshane-elihlekisayo, ezona ziqwenga zomculo zilungileyo nezimameleyo uCuDi wakha wakhululwa njengegcisa. 'Ukubuya kweNyanga yeNyanga' kudibanisa umzobo we-quartet womtya kunye nesiginci esibuhlungu, ngelixa i-Imperial March izimpondo-ngokufana ngokufanayo ukuya NguYesu 'Igazi' elikumagqabi' — Isandi ngaphezulu. Inokuthi iphantse ifike kwi-albhamu yokugqibela yeFuck Button kwaye ihambe ingabonakali. 'ICopernicus Landing' yindawo ezolileyo, ekhanyayo ye-New Age synths, isandi soomatshini abancokola ngokuzolileyo omnye komnye. Ngobunzima, uCudi akazange athethe nelimdaka.
Into eyothusayo yenzeka ngelixa leshumi elinanye lika INDAWO YOKUHLALA , nangona kunjalo, kwaye iyakhankanya. I-sci-fi synths iyehla, njengoko isifuba esinamehlo esifileyo sikhukhumala. UCudi ucula-kamnandi, ngokuthozama, kwaye ngokungqinelana -Akukho nto ngaphandle kwekatala, ikhethwe ngomnwe ngenqanaba lobuchule elibonisa ukuba kufundwa nzulu ngoGreen Day's 'All By Myself'. Ingoma zimbini kuphela, kodwa ilizwi liyothusa, kwaye njengoko uCudi ezincumela ngokwakhe uncuthu olumnandi, uguqula kwangoko abe lolunye uluvo olunokubakho kuye: i-indie-pop-sad sad-sack troubador, ukurekhoda ebhedini engqengqelekileyo no-K. Ukurekhoda i-intshi ezi-7. Ngumbono ongenakulindeleka, kodwa kukujonga nje komntu ongazange akwenze kwirekhodi yeKid Cudi ngaphambili. Kwangathi irekhodi lakhe elilandelayo linokubandakanya izixhobo ze-sci-fi, okanye ii-anti-folk ditties, okanye zombini.
t.i. umzila wephepha
inani lentombazana yesikolo intombazana egqwethayo
michael kiwanuka uthando nentiyo
mgmt iintsomi zasebusuku
umalume tupelo alukho uxinzelelo
Ingubo yam yamanzi ebhatyi yakusasa 2